Kuuriyada Waqooyi oo laga dalbatay in ay dagaal ka fogaato | Berberanews.com
Home WARARKA Kuuriyada Waqooyi oo laga dalbatay in ay dagaal ka fogaato
Kuuriyada Waqooyi oo laga dalbatay in ay dagaal ka fogaato
Sarkaal sare oo ka tirsan Qaramada Midoobey ayaa madaxda Kuuriyada Waqooyi u sheegay in “si degdeg ah” loogu baahan yahay in la ilaaliyo khadadka looga fogaanayo halista dagaal in uu dhaco, sida warbixin lagu sheegay.
Qoraalka ka soo baxay UN ayaa imaanayo ka dib markii Pyongyang uu booqday Jeffrey Feltman oo ah sarkaalkii ugu sareeyay ee Qaramada Midoobey ee booqda dalka go’doominta lagu hayo muddo lix sanno ah.
Kuuriyada Waqooyi waxay sheegtay in ay ogolaatay in si joogto ah ay xiriir ula sameyso Qaramada Midoobey.
Xiisadda ka dhalatay hubka halista ah ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sare u sii kacday ka dib markii ay tijaabisay gantaal caag ka sameysan oo ah nooca qaaradaha isaga gudba.
Maamulka Pyongyang ayaa sheegay in gantaalka uu ahaa midkii ugu hormarsanaa, kaas oo lagu duqeyn karo dalka Mareykanka.
Tijaabada waxay qeyb ka ahayd tijaabooyiin joogto ah oo Kuuriyada Waqooyi ay ku sameyneysay nukliyerkeeda iyo gantaallada xambaari doona. Waxayna tallaabooyiinkaasi oo dhan jawaab u yihiin cunna qabateynta Qaramada Midoobey.
Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa dhankooda sameynaya dhoolatus militari oo awooddooda ay ku muujinayaan.
Axaddii, Kuuriyada Koonfureed waxay sheegtay in ay ku biirayso Mareykanka iyo xulafadiisa oo cunna qabateyn dheeraad ah saaraya Waqooyiga.
Labaatan shirkadood iyo 12 qof ayaa lagu daray diiwaanka cunna qabateynta oo Axadda dhaqan gali doono.
Tallaabada maamulka Seoul waa middii labaad oo bil gudaheed la qaado, waxaana laga damacsan yahay in laga jaro dakhliga caalamka ee caawin kara horumarinta nukliyerka Kuuriyada Waqooyi, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi.
Cadaadiskan wuxuu dheeraad ku yahay cunna qabateynta uu Golaha Amniga ee Qaramada Midoobey saaray maamulka Kim Jong-un.
Previous articleAbwaan cabdishakuur allayahdiik maansada mugsheeg
Next articleWararkii ugu Danbeeyey Caalamka Ruushka iiraan & Turkiga oo uhiiliyey Reer Falastiin